आजको राशिफल - Aajako Rashifal - Ratopress::रातो प्रेस
वि.सं. २०७६ चैत १३। बिहीवार। इ.स. २०२० मार्च २६। चैत्र शुक्लपक्ष। द्वितीया।
आफन्तको सान्निध्य र अभिभावाकको स्नेह प्राप्त हुनेछ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। प्रयत्न गरेको काम सम्पादन हुनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। नयाँ काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। व्यापारले फाइदा दिनेछ। तत्काल धेरै गर्न नसकिए पनि पछिका लागि जग बसाउने समय छ।
छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीसाथ काम लिनुहोला। फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपरे पनि कर्जामार्फत धन जुटाउन सकिनेछ। तत्काल फाइदा लिँदा लाभांश अरूलाई पनि बाँड्नुपर्ला। खर्च लागे पनि आवश्यकताका वस्तु जुटाउन समय लाग्नेछ। आफ्नो मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्।
स्वास्थ्य कमजोर रहनाले सोचेको उपलब्धि तत्काल नपाइएला। मिहिनेत परे पनि काम रोकिन सक्छ। सहयोगको तत्परता देखाउनेहरू पछि हट्नेछन्। तर केही समय लागे पनि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। अवसरवादीहरूले भने मौकाको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्।
फाइदा मात्र हेर्दा आलोचित भइनेछ। तापनि, आज अरूलाई दिने नभई भित्र्याउने समय छ। दिएको धनमाल पछि आफैंलाई आवश्यक पर्न सक्छ। पुरानो सम्झौता नवीकरण नगर्दा आफ्नो लाभांश गुम्न सक्छ। परिस्थितिअनुसार निर्णय लिन नसक्दा काममा पछि परिनेछ। अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि मान्यजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा अवश्यै लाभ हुनेछ।
मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। अध्ययन र लेखनमा प्रगति हुनेछ। पहिलेका कमजोरीलाई सुधार्ने मौका छ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सम्पादित कामबाट मनग्य लाभ हुनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। अहिलेको लगानीले पछिलाई फाइदा दिलाउनेछ।
सुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस
वि.सं. २०७७ असार १८गते बिहीवारको राशिफल
आज को राशिफल
आजको राशिफल पढ्नुहोस् – २०७७ असार २ गते मंगलबार
आजको राशिफल (२०७७ जेठ १६ गते शुक्रबार)
बझाङ पहिरो : ७ जना बेपत्ता (अपडेट)
बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका ८ मल्लेसीमा पहिरोमा परी ७ जना बेपत्ता भएका...
बारामा दुईवटा मोटरसाइकल ठोक्किंदा एक जनाको ज्यान गयो, अरु तीन जना घाइते
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका २३ सिसहनियामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको ज्यान गएको...
काठमाडौं । नेकपामा देखिएको विवाद मिलाएर पार्टीलाई जसरी पनि एकताबद्ध बनाएर...
शितगंगा १२ ले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा संचालन गरेका जनमुखी कार्यक्रम
रातोप्रेस संवाददाता, शितगंगा । अर्घाखाँची : पछिल्लो समय स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीलाई जनमूखी...
क्वारेन्टाइनका लागी विद्यालयको अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित राख्ने गरी सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाउने...